buug – Abubakar Mohammed
Ustaad Abubakar Mohamed wuxuu dadaal wanaagsan geliyay Buuggan Daawada Murugada oo ah mid umada ay u baahan yihiin qaasatan waqtigaan oo ay badatay murugada.
Sh Osman usuuli
Guddoomiyaha EIHSB London
Waxaa aad ii soo jiitay usluubka qoraaga u soo bandhigay sida hab fikirka maskaxdeenna uu saamayn wayn ugu yeelan karo nolosheena. Dhammaan dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waxaan kula talin lahaa inay akhristaan kana faa'iidaystaan buuggan si ay xal ugu helaan xaaladaha adag ee Nolosha.
Dr. Maryan Qaasim
Wasiiraddii hore ee caafimaadka, waxbarashada & adeegyada bulshada
Buuggan waxa uu xambaarsanyahay daawadii qofka uu u baahnaa oo ay ka mid tahay nusuusta sharciga ah iyo xikmado qofku uu duruus kala bixi karo si uu uga gudbo xaalada adag ee noloshiisa.
Dr Ali Mohamed Salah
Guddoomiyaha Iqra Foundation
Waa kitaab anfacaya dhallinyaro fara badan oo guurka albaabkisa taagan, laakin dariiq ay ugu dhaqaqaan & si loogu dhaqaaqo aan garaneynin ayuu kitaabkaan haggi doonnaa Insha allah.
Sh Saciid Raage
Aasaasaha Sakiinah Foundation
Inta aan aqrinaayay buuggan sadarba sadarka ku xiga aniga xiiso gaara buu ii lahaa casharada aan ku dhex arkayna waxaa ka muuqday waayo- aragnimo buuxdda.
Daahir Cali Kulmiy
Guddoomiyaha Alpha trust
Markii aan billaabay, aqrinta dhiganahan quruxda badan ee uu qoruhu ku magacaabay “Jacaylka aan dhammaad laheyn” waan ku qancay aadna waan uga helay.